Ubuntu Cinnamon, olona khuphiswano lubalaseleyo kwiLinux Mint | Ubunlog
Ubuntu Cinnamon, incasa yegosa elizayo, okona khuphiswano lubalaseleyo lweLinux Mint
Kwiminyaka yakutshanje, usapho lweCanonical luye lwatshintsha kakhulu. Ngaphandle kokujonga emva kwexesha, kwi-2015 yeza eyona nto ndiyithandayo, Ubuntu MATE efumene imeko yemizobo emva kokufudukela kubumbano. Kutshanje, njengakunyaka ophelileyo, uguqulelo olukhulu lubuyiselwe kwi-GNOME, ke Ubuntu GNOME ihambile, kwaye Ubuntu Studio isemgceni. Kwelinye icala okugqithisileyo kunjalo ICinnamon yoBuntu, incasa elandela amanyathelo Ubuntu Budgie inikwe ekupheleni kuka-2016.
Into eyenziwe nguBuntu Budgie, into eyahlukileyo kunaleyo yenziwe ngu-MATE MATE, yayiqhutywa njengomgqatswa ukuba abe sisinambiso esisemthethweni se-Ubuntu kwaye iCanonical yababona, kodwa abalisebenzisanga igama labo lokugqibela bade baba yinxalenye yosapho ngokusemthethweni. Ekuqaleni, babebizwa ngokuba nguBudgie Remix, kanye njengokuba inguqulelo ye- "Cinnamon" ngoku ibizwa ngokuba yi-Ubuntu Cinnamon Remix. Ngegama elichazwe yimithetho yeCanonical esele ibekiwe, Inyathelo elilandelayo kukubabonisa ukuba banokwenza iiphakheji zobuntu ngokufanelekileyo.
Ubuntu Cinnamon inokuba yincasa ka-Ubuntu 9
Inqaku elinomdla, elihlala liphawulwa, umzekelo, kwiindaba zemidlalo, kukuba iakhawunti esemthethweni Ubuntu kwi-Twitter waqala walandela ku-Ubuntu Cinnamon ku-Agasti ophelileyo. Ezi nkampani azithunyi ngaphandle komtya kwaye lo luphawu olunokuthathwa njenge wamkelekile kusapho.
Kodwa basathatha amanyathelo okuqala. Okwangoku, iwebhusayithi iphantsi kophuhliso (ubuntucinnamon.org) kwaye unokufikelela kuphela ngekhowudi. Bakwinqanaba lokuqala kangangokuba, ngelixa kuyinyani ukuba kukho ingxelo yovavanyo esele ilungisiwe, bathi bazakukhupha Ubuntu Cinnamon 19.10 kwangoko nge-2020, oko kuthetha ukuba akuyi kubakho nguqulelo ngomhla wokukhutshwa kuka-Eoan Ermine eya kuba nge-17 ka-Okthobha.
Kwaye iyakuba yintoni Ubuntu Cinnamon? Nantsi enye incasa. Njengabo bonke abanye, iya kuba sisasazo esisekwe kuBuntu esixhaswa yiCanonical, nangona iya kugcinwa ngabaphuhlisi bayo. Njengokunambitheka okusemthethweni, intliziyo yayo iya kuba ngu-Ubuntu, kodwa iya kusebenzisa indawo yemizobo yeCinnamon, kunye nokusetyenziswa kwayo, ii-applet kunye nezinye eziya kuthi zinike amava omsebenzisi ahluke kubo bonke abanye abazalwana. Kufanele ukuba ifane nokusebenzisa Linux mint, owenza indawo yemizobo yeCinnamon yaduma. Kananjalo, ukuba inguqulelo ebalulekileyo njenge-Ubuntu Cinnamon iya kuyisebenzisa iya kwenza ukuba i-desktop "Cinnamon" iphucule ngokukhawuleza.
Ngaba unomdla kweli candelo litsha losapho Ubuntu?
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Iidesika » Ezinye iidesika » Ubuntu Cinnamon, incasa yegosa elizayo, okona khuphiswano lubalaseleyo lweLinux Mint
Unomdla kakhulu. Masilinde ukubona ukuba kwenzeka ntoni.
UMonica Martin sitsho
Nguwuphi umahluko oya kubakho phakathi kwe-Ubuntu Cinnamon kunye nokufaka i-desktop kwi-Ubuntu? Umzekelo, ndifake i-Xfce desktop kwi-Ubuntu 20, kwaye ndingathanda ukwazi ukuba uza kwenza mahluko mni ukuba ndiyifakile iXubuntu 20.
Phendula Mónica Martín
IPlasma 5.18 iya kuphucula itreyi yenkqubo yePlasma
IWebRender yenziwe ngokungagqibekanga kwiFirefox 71, ikwayiLinux